» दोहोरी च्याम्पियनका अचम्मका रेकर्डहरु
दोहोरी च्याम्पियनका अचम्मका रेकर्डहरु
२५ कार्तिक २०७८, बिहीबार १९:०२
चन्द्र घलान,मकवानपुर, २५ कात्तिक । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ ले नेपाली लोकदोहोरी संगीतको क्षेत्रमा अलग्गै पहिचान बनाउन सफल भयो । शो सकिएता पनि यसमा सहभागिता जनाएका र विजेता तथा उपविजेता बनेका प्रतियोगीहरु अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । दोहोरी च्याम्पियनमा त्यस्ता केही अचम्मका रेकर्डहरु पनि भएका छन् जुन रेकर्डहरु दर्शकहरुका लागि र विजेताहरुका लागि पनि यादगार रहेका छन् । यस भिडियो सामग्रीमा दोहोरी च्याम्पियनका ४ वटा रोचक रेकर्डहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
नम्बर १– दोहोरी च्याम्पियनको सर्वाधिक हेरिएको एपिसोड कुन होला जस्तो तपाईलाई लाग्छ ? दोहोरी च्याम्पियनको सर्वाधिक चर्चित र सर्वाधिक हेरिएको एपिसोड यसको २१ औँ एपिसोड हो । यस एपिसोडले दोहोरी च्याम्पियनको उचाईलाई धेरै माथि उकासेको थियो । यस एपिसोडमा प्रतियोगिताकै सर्वाधिक चर्चित प्रतियोगीहरु गायिका अस्मिता डल्लाकोटी र गायक वसन्त विश्वकर्माले दर्शकहरुका साथै निर्णायक र उपस्थित अतिथिहरुलाई दोहोरी गाएरै रुवाएका थिए । निक्कै नै मार्मिक विषयमा गाइएको यस दोहोरी भिडन्तबाट वसन्त र अस्मिताको जोडी चर्चित बनेका थिए । उनीहरुलाई दर्शकहरुले दोहोरी गाएर रुवाउने जोडीका रुपमा अहिलेसम्मै चर्चा गर्ने गरेका छन् । उनीहरुको रुवाउने प्रस्तुतिपछि गायक जीवन सिग्देल र गायिका पवित्रा मगरले रमाईलो दोहोरी गाएर माहोल परिवर्तन गरेका थिए । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस एपिसोडलाई २४ लाख २३ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा ४९ हजार लाईक र ४ हजारभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर २– दोहोरी च्याम्पियनमा एउटै टिम दुई पटक भिडेको रेकर्ड पनि कायम भएको छ । प्रतियोगिताका उपविजेता तथा चौथो हुन सफल टिमले दुई पटक दोहोरी भिडेका थिए । उत्कृष्ट २४ बाट उत्कृष्ट १२ को छनौटका क्रममा सँगै भिडेका उपविजेता बालचन्द्र बराल र शोभा कार्कीले चौथो हुन सफल जोडी राजेन्द्र पाठक र मिना नेपालसँग दुई पटक दोहोरी भिडेका थिए । उत्कृष्ट १२ का छनौटका क्रममा राजेन्द्र र मिनाले पराजय भोगेता पनि उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत उत्कृष्ट १६ मा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपश्चात उनीहरुले उत्कृष्ट ४ अर्थात सेमिफाईनलमा फेरि एकपटक दोहोरी भिडेका थिए । दुई पटक भिडेका राजेन्द्र र मिना चौथो तथा बालचन्द्र र शोभा दोस्रो हुन सफल भएका थिए ।
नम्बर ३– दोहोरी च्याम्पियनको सर्वाधिक हेरिएको दोहोरी भिडन्त कुन होला ? हजुर, दोहोरी च्याम्पियनको सर्वाधिक हेरिएको दोहोरी भिडन्त पनि गायक वसन्त विश्वकर्मा र गायिका अस्मिता डल्लाकोटीबिचको दोहोरी भिडन्त हो । उनीहरुबिचको यो दोहोरी भिडन्तको क्लिपलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ११ लाख ९१ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यो क्लिपमा १७ हजार लाईक र ८ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
नम्बर ४– दोहोरी च्याम्पियनका विभिन्न एपिसोडहरुमा चर्चित अतिथिहरु उपस्थित भएका थिए । उनीहरुले प्रतियोगी तथा शोका निर्णायक र प्रस्तोताहरुसँग खेलेका दोहोरीहरु पनि निक्कै चर्चित भए । ती अतिथिहरुमध्ये गायक प्रकाश सपूत र गायिका देवी घर्ति उपस्थित हुँदा गाईको दोहोरी क्लिप चर्चित बनेको छ । यो क्लिप दोहोरी च्याम्पियनको सर्वाधिक हेरिएको अतिथिको दोहोरी भिडन्त हो । यस अतिथि दोहोरी भिडन्तलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा १३ लाख २५ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यो क्लिपमा १५ हजार लाईक र २ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–